Jereo hoe inona ny fizahan-tany ara-panatanjahantena ary aiza no hanaovana azy | Vaovao momba ny dia
El lasa fizahan-tany hafa ny fizahan-tany ara-panatanjahantena izany dia miha malaza hatrany. Ny endrika fizahan-tany dia niova haingana noho ny fanatontoloana, fanatsarana ny fifandraisana ary ny vidin'ny fitaterana ambany, izay midika fa manana antony maro isan-karazany isika izao mitsidika toerana samihafa, manasongadina bebe kokoa ny tontolon'ny fizahantany. Ny dia lavitra dia lavitra ataon'ny vondron'olona kasaina hatao any amin'ny faritra amoron-dranomasina na mahita teboka miorina amin'ny tanàna.
Androany ny tontolon'ny fizahan-tany dia tena isan-karazany sy afaka, teo no nipoitra ny fizahan-tany ara-panatanjahantena, fampiharana iray izay tena mahaliana ary mety ho lasa antony manosika lehibe handeha. Ho hitantsika eo hoe iza ity fizahan-tany ara-panatanjahantena ity sy ny fomba hanatanterahana an'io karazana fizahan-tany io na amin'ny toerana hahitana azy.
1 Inona ny fizahan-tany ara-panatanjahantena?
2 Karazana fizahan-tany ara-panatanjahantena
3 Mihazakazaka marathon
5 Toerana fanaovana ski
6 Fizahan-tany ara-panatanjahantena ho an'ny surf
7 Hetsika sy fizahan-tany ara-panatanjahantena
Inona ny fizahan-tany ara-panatanjahantena?
Ny fizahan-tany ara-panatanjahantena dia a karazana fizahantany mifantoka amin'ny fanatanjahantena. Mandehandeha mijery tompondaka na lalao ianao. Mahazatra koa ny mandeha manao fanatanjahan-tena, toy ny fanaovana làlana fitsangatsanganana manokana na amin'ny kite na surf amin'ny morontsiraka izay tena mahasoa azy. Miroborobo izao ny fizahan-tany ara-panatanjahantena satria mora kokoa ny manao dia kely noho ny taona lasa. Izany no antony mahatonga ny olona maro izay mandeha mandritra ny andro vitsivitsy hijery lalao na hanao fanatanjahan-tena ho an'ny fialamboly tsotra. Ity dia fomba iray hafa hijerena ny dia, mifantoka amin'ny fanatanjahan-tena tiantsika sy fialam-boly. Ankehitriny ny fitsangatsanganana dia mihoatra ny fitsaharana, ny fandosirana na ny fitsidihana ara-kolontsaina.
Karazana fizahan-tany ara-panatanjahantena
Ny fizahantany ara-panatanjahantena dia mety ho karazany maro. Afaka ataontsika mandehana any amin'ny faritra tendrombohitra mba hanao ski, handeha amin'ny làlana fitsangantsanganana na koa mandeha amin'ny hazakazaka marathon ao an-tanàna, satria misy maro izay malaza koa. Etsy ankilany, misy ireo izay manao fizahan-tany amin'ny fanatanjahantena amin'ny alàlan'ny fanatrehana hetsika sasany, indrindra amin'ny lalao baolina kitra, toy ny mitranga any Espana na erak'i Eropa miaraka amin'ireo hetsika toy ny Soccer World Cup na ny European Cup.
Betsaka ny faritra ahafahantsika mihazakazaka, manomboka amin'ny folo kilometatra ka hatramin'ny antsasaky ny marathon na marathon feno. Fa ny sasany amin'ireo marathon, izay anomanan'ny olona an-jatony, no tena malaza. Ny iray any New York dia iray amin'izy ireo, fa misy iray ihany koa any Boston, Paris na Berlin. Ireny hetsika goavana ireny dia mazàna mitranga amin'ny toerana toy ny tanàna lehibe ary hetsika iray iainana azo iarahana. Saingy tokony ho vonona ianao hihazakazaka ny 42 kilometatra amin'ny hazakazaka marathon.
Misy toerana izay alehan'ireo izay te hanao fanatanjahan-tena mitaky fanakihana, izay ilana mari-pahaizana manokana. Any Espana dia manana toerana toa antsika izahay ohatra ny Naranjo de Bulnes, izay misy rindrina mitsangana tsara. Ny toerana tsy mampino hafa dia ny Mount Asgard any Canada, ao anatin'ny tontolo misy ranomandry sy ranomandry, Yosemite any Etazonia, miaraka amina rindrina vato lehibe hianihana. Ao Patagonia any Arzantina dia ahitantsika tendrombohitra mahatalanjona ihany koa izay nofinofin'ireo mpihanika tendrombohitra rehetra.
Toerana fanaovana ski
Any Espana dia manana toeram-pisakafoanana ski mahafinaritra izahay, noho izany dia betsaka ny fizahan-tany amin'ny ririnina. Ohatra, manana gara toa anay izahay Baqueira Beret any Lleida, malaza be sy tsy manam-paharoa, miorina amin'ny lohasaha Aran mahafinaritra. Mahatratra 160 kilometatra ny dian-tongotra marika. Ny toeram-pitsangatsanganana iray hafa dia any Huesca, Formigal, miaraka amin'ny rivo-piainana mahafinaritra an'ny tanora. Ny iray amin'ireo malaza indrindra dia ny Sierra Nevada any Granada, tena malaza amin'ny fianakaviana. Any ivelan'i Espana dia misy toerana hafa toa an'i Chamonix any Frantsa, Zermatt any Suisse na any Portillo, Chile.
Fizahan-tany ara-panatanjahantena ho an'ny surf
Miparitaka be ny fanazaran-tena amin'ny fanatanjahantena anaty rano ary misy toerana ahafahana manao azy ireo mandritra ny taona mandavantaona. Any Espana dia manana toerana toa antsika izahay Morontsiraka Mundaka any Vizcaya, torapasika Pantín any Ferrol na Razo any A Coruña, izy rehetra any avaratra. Misy ihany koa ny hafa miorina amin'ny toerana toa ireo nosy, toa an'i El Quemao any Lanzarote. Ao amin'ny faritra atsimo dia mahita toerana toa an'i Cádiz izay manana moron-dranomasina maro ianao ahafahanao manao izany karazana fanatanjahantena izany noho ny toe-piainan'izy ireo.
Hetsika sy fizahan-tany ara-panatanjahantena
Misy hetsika sasany izay malaza be foana. Ny lalao famaranana amin'ny lalao baolina kitra lehibe toy ny amboara eran-tany na ny amboara dia hetsika izay lalaovina amin'ny toerana samihafa. Misy koa ny hafa toa an'i Wimbledon na ohatra ny Tour de France, raha tiantsika ny bisikileta, izay afaka arahan'ny faritra maro any Frantsa, na ny fitsangatsanganana bisikileta any Espana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Fizahan-tany ara-panatanjahantena